I-Jamboard: Isibonisi Esihlanganyelwe se-4K Esihlanganiswe Nezinhlelo Zokusebenza ze-Google | Martech Zone
I-Jamboard: Isibonisi Esihlanganyelwe se-4K Esihlanganiswe Nezinhlelo Zokusebenza ze-Google
Lwesine, Disemba 7, 2017 NgoLwesine, ngo-Okthoba 1, 2020 Douglas Karr
Akuvamile kakhulu ukuthi ngibhale ngehadiwe, kepha ngonyaka odlule ngihlanganyele i- Izibani zeDell I-podcast ivule amehlo ami ngqo kumthelela wehardware onayo ekukhiqizeni, ekusebenzeni kahle, nasekuqambeni izinto ezintsha. Ngenkathi sihlala singena futhi singena kwisoftware nsuku zonke - ihadiwe esefu nasetafuleni lethu liguqula izinhlangano zethu futhi.
Ngokukhula kwamandla okusebenza akude, ukusebenzisana okukude kuya kuba yisidingo - futhi G Suite uphendula nge I-Jamboard. I-Jamboard isibonisi esingu-4k esenza amaqembu akwazi ukudweba imibono yawo, alahle izithombe, engeze amanothi, futhi adonse izinto ngqo kusuka kuwebhu ngenkathi usebenzisana namalungu eqembu kusuka noma yikuphi. Okuhle kunakho konke, amandla akho akude angasebenzisa ama-Jamboard amaningi noma uhlelo lokusebenza lwe-Jamboard ocingweni noma kuthebhulethi (Android or iOS).
I-Jamboard service kuvumela G Suite abalawuli ukuphatha amadivayisi abo e-Jamboard, futhi kunika amandla abasebenzisi be-G Suite ukuthi bahlanganyele nokuqukethwe kwe-jam kubo ifoni, tablet, noma ku- web. Emavikini azayo, insiza yeJoardard izoba insizakalo eyinhloko ye-G Suite.
I-Google icabange ngayo yonke into, kusuka kwikhamera ebanzi ebanzi, imakrofoni eziningi, evumela izindawo zokuthinta ezi-16 ngasikhathi sinye, ukubhala ngesandla nokubona ukwakheka, futhi kufaka phakathi ipeni lokwenziwa nokusula okungadingi ukubhangqwa.
I-Jamboard iqala ku-USD $ 4,999 (ifaka phakathi ukuboniswa kwe-1 Jamboard, ama-styluses ama-2, i-eraser engu-1, kanye ne-1 wall mount) kanye ne-USD $ 600 yonyaka yokuphatha kanye nemali yokusekela.
Bheka i-Jamboard Landa i-Jamboard Specs
Tags: 4kukusebenzisana ukubonisaG SuitegoogleiOSndabaarduhlelo lokusebenza lweselulatablet
Kungani Inkampani Yakho Kufanele Isebenzise Ingxoxo Ebukhoma
Izinto Eziyisi-6 Zomkhankaso Wokumaketha We-SMS Ophumelelayo